SALAD NOOCEE AH AYAA LAGA SAMAYN KARAA HADHUUDH QASACADAYSAN IYO NOOCYO KALE OO KA MID AH: SIDA LOO KARIYO AMA LOO KARIYO, XITAA HADDII LA QABOOJIYEY, IYO MAXAY TAHAY FAA'IIDADA SHEYGA? - KHUDRADDA
Corn waxaa loo isticmaalaa qaabab kala duwan: la kariyey, la kariyay, la qalajiyey, la shiilay, oo weliba lagu daray saladh kala duwan. Sidee ay waxtar u leedahay iyo sida loo kariyo salad leh hadhuudh, waxaa lagu falanqeyn doonaa qodobkan.
Corn waa geedka sanadlaha ah. Wuxuu jecel yahay carrada dabacsan, iftiinka iyo kuleylka, uma dulqaadan karo xayawaanka, laakiin wuxuu u dulqaadanayaa abaar. Dhuxul oo ah hadhuudhku wuxuu gaaraa 7 cm dhexroor iyo 4 m dhererka, caleemaha - ilaa 9 m dhererka.
Florescences ee hadhuudh waa rag iyo dumar: ugu horeysay ee foomka of panicles ee qaybta sare ee geedka, labaad - foomka cobs ee axils of caleemaha. Cobs ka mid ah warshad waa caadi ahaan laba, mid kasta oo miisaankiisu yahay 50 ilaa 500 g, dhererka 40 ilaa 500 mm, dhexroor 20-90 mm. Qaybta kore ee rugta waxaa lagu qurxiyaa xidhmo fiiqan leh stigmas.
Mucooyinka timirta - qaabdhismeed ama qaab wareegsan, oo ku yaalla dooxada khadadka cufan, tirada iyaga ku jirta hal koollo waxay gaari kartaa ilaa kun oo gogo '(kaas oo la diyaarin karo hadhuudhka ku yaala cob, halkan ka akhriso).
Waa muhiim! Fiber ka kooban halbowlaha ayaa taageeraya isdhexgalka mashiinka dheef-shiidka, xiro oo ka saaro sunta sunta, sunta, radionuclides iyo sunta, waxay ka hortagtaa cirridka iyo halsano ee xiidmaha.
Faytamiin A sida qayb ka mid ah hadhuudhku waxay hagaajinaysaa aragga, fiitamiin E iyo selenium waxay gacan ka geystaan ​​jirka inuu xakameeyo horumarinta burooyinka. Sababtoo ah fiitamiin B, siriyadu waxay ka caawisaa dhibaatooyinka leh hurdo hurdo, maskax iyo jidhka.
Faleebo laga helo maadada ayaa hoos u dhigeysa cadaadiska dhiigga. Magnesium iyo potassium ee qayb ka mid ah hadhuudhku wuxuu xoojiyaa nidaamka wadnaha, zinc, manganese iyo fosfooraska ayaa saameyn togan ku leh nidaamka dheddig-laboodka haweenka iyo awoodda haweenka, si caadi ah u wareegsan, waxay jilcisaa calaamadaha menopause.
Saliidda moofaarka ayaa ka qaadata kolesteroolka xun jirka, ka soo horjeeda cudurrada dermatolojiga waxayna fududeeyaa muuqaalka diabeteska. Maaskaro korneel ah ayaa caawisa in laga takhaluso finanka, dhibco nadiif ah, maqnaansho maqaarka, waxay hagaajisaa xaaladda timaha iyo ciddiyaha.
Corn ee qayb ka mid ah saladh ma lumiso hantida faa'iido leh oo dhadhami.
Dukaanka waxaad ka iibsan kartaa cusbo, la kariyey, qasacadaysan ama la qaboojiyey oo diyaarinaya digsi dhadhan fiican leh, nafaqo leh iyo caafimaad leh, laakiin qof kastaa ogyahay siyaabaha iyo sida loo sameeyo. Waxa la karin karo hadhuudhka qasacadaysan ayaa laga heli karaa halkan.
Suugaanta Cornka waxaa laga helaa noocyo kala duwan oo adduunka ah. Iyo sida loo sameeyo makhaayad guriga ah iyo maxay yihiin cuntooyinka loogu talagalay karinta boorashka hadhuudhka - ka akhri boggayaga.
Fry mid ama laba cantoobo oo miro ah oo saliidda cuntada ah, ka dibna yareeya kuleylka oo kari biyo leh 5-7 daqiiqo.
Iska yaree yaanyada, basasha iyo geedo yaryar, ku dar milix yar iyo basbaas, isku walaaq baaquli salad.
Ku dar digirta la kariyey ee saladhka ay la socoto subagga kaas oo la kariyey oo mar kale isku daraan.
Salad waa diyaar!
In cunto kariye caadi ah, salaad ah ayaa loo sameeyey sida soo socota:
Isku qas in baaquli saxar ah oo hadhuudh ah iyo weel ku yaal tuna ku jira casiirkiisa.
Iska yaree basasha, laba ukun la kariyey iyo 3-4 qajaarka la qaado.
Ku dar dill jar jartey iyo 3 qaado oo ah majones.
Dhammaan qaybaha ayaa mar kale isku dhafan, ka dib marka salad loo adeegsan karo miiska.
Sidoo kale saxanka, waxaad ku dari kartaa dhadhanka caleenta salad, saytuun la jarjaray, qajaar iyo yaanyo.
Si aad u kariso salad diiran waxaad u baahan doontaa duufaan iyo saliid.
Iska yaree basasha qaybaha kala badh iyo qoraallada ilaa inta jilicsan ee digsiga qaboojiyaha kulul, kareyso si joogto ah.
Ku dar boqoshaada qasacadeysan adoon brine oo sii soco ilaa 15 daqiiqo, ha qaboobin.
Si yaryar 5 ukun la kariyey.
Isku qas in ukunta baaquli, boqoshaada leh basasha, weel kus oo ah hadhuudh qasacadaysan, xilli leh majones, milix ay u dhadhamiso oo dhirtana saytuunada, maraqa qajaarka ama cagaarka.
Waa muhiim! Salaadkan waxaa lagula talinayaa kuwa dhadhansiiya ama ku daboolaya nafaqada habboon. Kaabashka soodhanka ayaa ku habboon wax kasta: caddaan, guduud, saliid, pickled, Beijing, badda, midabka, broccoli.
400 g oo ah kaabajo kasta oo la jarjaray ama la googooyey oo ku duuban yaryar. Cagaarka iyo brokoli waa in la kariyaa ka hor inta aan la diyaarin salad.
Iska yaree qajaarka xaleef khafiif ah.
Kudar isku dar oo ah hadhuudh aan lahayn dareeraha iyo farabadan cagaarka la jarjaray.
Grate ama jar jartey tufaaxa.
All isku darka, xilli leh qaaddo saliid saytuun, cusbo.
Salad Tani waa mid aad u nafaqo leh oo qandaraas, waa sahlan tahay in la kariyo., kaliya waa inaad karkarisaa digaagga horey ama aad u iibsato diyaar.
300 g oo hilib digaag ah iyo 2 qajaar oo cusub ayaa jarjaraya.
Isku dar nus nus oo ah hadhuudh aan lahayn dareere.
Karkari 3 ukun, qaboow, borotiinada dufan ee baaquli.
Ku dar majones, milix iyo basbaas yar haddii loo baahdo, isku walaaq wax walbana, ku rid baaquli salad ah oo ku rusheeya jaallo.
Iyada oo digirta
Saladkan saliida leh waxaa loo saari karaa cunto iyo fitamiinIntaa ka sokow, digirta ayaa leh waxyaabo badan oo faa'iido leh: waxay yaraynaysaa heerka sonkorta ee dhiiga, waxay caadi u tahay dheef-shiid kiimikaad, oo saameyn togan ku leh wadnaha iyo xididdada dhiigga.
Ka tirtir weel digirta qasacadaysan, ku rid baaquli.
Iska yaree 2 qajaar cusub cusub.
Si yaryar u jar cagaarka.
Iska daadi hadhuudhka oo ku rid baaquli.
Xilliga leh qaado qaado oo ah labeen dhanaan, milix iyo qaso.
Iyada oo ukun ah
Salad Tani waxay diyaarisay dugsi hoose: bir ah oo ah hadhuudh iyo 3 ukun la kariyey oo lagu daray qasacad iyo cagaar. Si aad u heshid cunto fudud oo degdeg ah, fursadda ugu fudud.
Laakiin waxaad u isticmaali kartaa asaas ahaan iyo ku dar waxyaabo kale:
boqoshaada la dubay ama la kariyey;
kalluunka cas, cayayaanka dib udajinta, duufaanka ama beerka xayawaanka (fiiri cuntooyinka kale ee xiisaha leh ee salad u samaysan iyo hadhuudh iyo buunshaha, halkan);
karootada la kariyey iyo basasha;
cusub, cusbayn ama qajaar la qabadsiiyey;
farmaajo ama farmaajo la kariyo;
digaaga ama hilibka digaagga la dubay ama la kariyey;
sausage ama ham.
Waxay ku xiran tahay fikrada ah ee martida iyo dhadhanka martida.
Boogaha Bacon-macaan ayaa ugu fiican saxan.
3 karootada ka diga ah iyo basasha jarjaran oo la jarjaray ayaa la shiilay saliidda cuntada, kaas oo la nadiifiyo ka dib karinta.
6 ukumo waa la kariyey oo si yarna loo jarjaray.
Kareem oo ah hadhuudh, dareeraha dhogorta, isku dhafan walxaha oo dhan, ka buuxi majones iyo geedo yaryar sida loo doonayo.
Waa muhiim! Kirieshki ku dar saxanka isla markiiba kahor intaadan adeegin ama baaquli gaar ah. Haddii aad ku qasto salaar, waxay noqdaan dabacsanaan la'aan, mana ku mashquulayaan.
Qaar badan oo ka mid ah suxuunyadan waxay helayaan dhadhan gaar ah haddii aad bedesho hadhuudhka qasacadaysan. Waxaad si buuxda kalsooni ugu qabsan kartaa shaqadaada, martida waxay xiiseyneysaa dhadhan aan caadi ahayn ee suxuunta. Waxaa jira siyaabo badan oo loo soo saaro hadhuudh salad, hoos ku xusan waa afarta ugu fudud.
Corn for Bisaylkiisa Caanaha waxay ku haboon tahay marinating. Waa sahlan tahay in la go'aamiyo heerka heerka bislaanshaha, waa ku filan in la gooyo hadhuudh yar: Haddii aad maamusho inaad si fudud u sameyso oo aan casiir lagu sii deyn dusha sare, waad ka soo karin kartaa miraha.
Haddii ay adagtahay in la xoqo maqaar, sida hadhuudhku waa mid aan ku habbooneyn in la kariyo. Haddii casiir la sii daayo, ka dibna waa hadhuudh aan caadi ahayn, ha u jiifin meel diiran oo xoogaa ah.
Sidaas, si aad u kariso hadhuudh la kariyey mid ka mid ah hababka caadiga ah, waxaad u baahan doontaa:
sonkorta lagu dubay - 3 qaado;
cusbo - 1 qaado oo ah;
Korniinka nadiifka ah, raaci oo ku qallaji biyo karkaraya 2-3 daqiiqo si hadhuudhku u fududeeyo.
Si tartiib ah uga saar iyaga mindi iyo mar labaad gelin biyo karkaraya dhowr daqiiqadood.
Ka dibna biyo daadi oo ku dar dhalada si aad u diyaariso barmiil barafaysan oo loogu talagalay 2/3 mugga weelka.
Ka samee sharoobada biyaha, sonkorta iyo cusbada, ku shub hadhuudh, ku xir xidhmooyinka daboolka leh daboolka iyo nadiifinta 3-4 saacadood.
Ka dibna gogol barafka, ku shub oo hoos u dhig.
Habka macaan iyo dhadhanka
Isticmaalayo dhadhanka labaad, waad karin kartaa hadhuudhka macaan-macaan.
miro hadhuudh - 1 kg;
Sisin 9% - dhawr shaambadood oo yar oo ka mid ah tirada qasacadaha;
Geedka hadhuudhka ah waxaa lagu hayaa biyo karkaraya 5 daqiiqo.
Biyo cusbo leh waxaa loo keenay karkar.
In barmiil jeermis dilay, gelin caleen ah on hoose, iyaga buuxi 2/3 of kernels hadhuudh iyo ku dar 1 qaado oo khal, ka dibna ku shub brine.
Bangiyadu waxay daboolaan daboolka waxayna u socdaan ilaa hal saac.
Kadibna waxay xirxiraan daboolka daboolka, dibna u rog, iyaga ku dabool buste oo u ogolow inay qaboojiso.
Corn waa la gooyaa oo keliya miro, laakiin sidoo kale on cob. Si arrintan loo sameeyo, waxaad u baahan tahay 7-9 cobs yar, hal litir oo biyo ah iyo 1 qaado oo cusbo ah.
Corn waa la kariyaa ilaa la kariyey biyo aan biyo lahayn.
Si gaar ah u diyaariso marinade biyaha oo cusbo leh.
Qaboojinta labada, gelin rugta ee dhalooyinka iyo ku shub marinade.
Dheeraad ah, sida caadiga ah: bangiyada ayaa la nadiifiyaa 3-4 saacadood, oo la daboolay daboolka, dib loo rogay iyo bidix si loo qaboojiyo.
Cunno aan caadi aheyn oo lagu karsado hadhuudhkii la kariyey ee yaanyo waxay la yaabi doontaa oo farxad gelineysaa gurigaaga iyo martida. Sidaa darteed waxaad u baahan tahay:
hadhuudhkii bislaanshaha caanaha - 0.5 kg;
yaanyo yaanyo - 10 ml;
biyaha - 0.5 koob;
oo khal - 10 ml;
basbaaska madow-digir - 6-8 gogo ';
iniin khardal - 0.5 tsp;
cusbo aan ahayn - 8 g;
sonkorta granulated - 1 tsp oo leh santuuq yar.
Nadiifi cobs, jarjar qayb, nus ilaa 40-45 daqiiqo. Biyaha ka daadi, qabow hadhuudhka oo si taxadar leh u gooyaa hadhuudhka safafka leh mindi fiiqan.
Qeybta hoose ee gasacadaha laisugu daboolay dhowr digir oo ah basbaas, oo ah iniin khardal ah oo yar iyo xabbad yar oo toon ah oo toon ah.
Daqiiqada hadhuudhka ku rid dhalooyinka, dusha sare oo la jarjarey.
Ku daadi yaanyo yaanyo leh biyo karkariyo cusbo, sonkor iyo geed isbonjiid ah.
Ku dabool daboolka leh daboolka, nadiifin ilaa 15-20 daqiiqo, xiro daboolka, dhalooyinka ku laalaabi jarjar kuna tag si aad u qaboojiso.
Waa muhiim! Marka la kariyo hadhuudhka ka hor inta aan la nadiifin, waxaa lagama maarmaan ah in laga saaro xumbada ka soo baxda biyaha dushooda.
Corn waa cuntad guud oo guud. Salad baradho waa dhadhan fiican oo nafaqo leh., iyo xataa marti-gelinta bilowga ah waxay la qabsan doontaa ilaalinteeda xilliga jiilaalka.
Casiirka ah Mexicii Mexican ma luminayaan alaabooyinka nafaqada iyo faa'iidada leh marka la karinayo ama ilaalinayo, sidaas daraadeed marwalba way fiicantahay in aad naftaada u jajabiso, kuwa aad jeceshahay iyo martida leh suxuun ka soo sheygan cajiib ah.